Ogaden News Agency (ONA) – Itobiya Waxay Taagantahay meel Afar Irdood ah (Crossroad) – Noora Afgaab
Itobiya Waxay Taagantahay meel Afar Irdood ah (Crossroad) – Noora Afgaab
Magaala walba waxay leedahay meel badhtanka ah oo wadooyinka ay ku kala baydhaan. Waxaa loogu yeedhaa Afar-Irdood (Crossraod) waana meesha afarta jaho uu qofwalba meeshuu doono uga dhaqaaqo. Sidaa darteed ayaa dawladaha marka ay marayaan xaalad kala guur ah loo yidhaahdaa waxay taagan yihiin Afar-irdoodkii, oo loola jeedo lama garan karo inay u dhaqaaqi doonaan dhanka burburkooda iyo inay u dhaqaaqi doonaan dhankay ku badbaadi lahaayeen.
Itobiya way qasan tahay, xag siyaasadeed, dhaqaale, bulsho iyo xidhiidhka diiniga ahba. Xataa diimihii isku midka ahaa ayaa is-wada haysta. Kaniisadda Orthodox-ka oo looga talin jiray Itobiya waxay u kala fadhiyaan laba qaybood. Koox Tigree ah oo xoog ku qabsaday madaxa ugu sareeya kaniisadda iyo koox sheeganaysa inay yihiin kuwii sharciga ahaa oo saldhig ka samaystay Waqooyiga Ameerika. Muslimiinta sidoo kale ayay kooxda EPRDF/TPLF oo aad u jecel inay ka abuuraan meel walba kooxo iska soo horjeeda, ayaa waxay u kala qaybsan yihiin laba kooxood iyo ka badan oo ku tartamaya Majliska Sare iyo masaajidda.
Warbixintii ugu dambeysay ee Sirdoonka Mareykanka kasoo baxday ayaa waxaa lagu soo bandhigay waxyaaba badan oo qaarkood horeyba loo ogaa iyo arima badan oo qarsoonaa oo intaba muujinaya in kooxda EPRDF/TPLF ee xukunka haysatay 24kii sanee u dambaysay ay gaadhsiiyeen Itobiya meel aanay kasoo noqon karin, hadana ay qarka u saaran tahay inay kala dhaqaaqdo. Waxay warbixinta Sirdoonka Mareykanka tooshka ku qabanayaan dhibaatada ay ciidanka Itobiya u gaysteen shucuubta sida gaarka ah loo colaadiyay ee shacabka Ogadenya uu ugu horeeyo. Waxaa kaloo ay warbixintu tibaaxaysay siyaasadda ay adeegsadaan kooxda tirada yaree Tigreega ah oo ku dhisan Qaybinta iyo iska horkeenka qawmiyadaha dhexdooda iyo kuwa dariska ahba, waana siyaasadda ay ku maamulaan Tigreega dalka Itobiya. Waxayna ku tilmaameen inay tahay siyaasadda ugu dambaynta keeni doonta kala tagga qawmiyadaha Itobiya, taasoo ay hadaba muuqato.
Waxaa maalmahan si weyn looga hadal hayaa Adisababa iyo guud ahaan dalka Itobiya warbixintaa ay soo bandhigeen Sirdoonka Mareykanka. Su’aasha 1aad ee la’is weydiinayo ayaa ahayd; Maxay tahay sababta Sirdoonka Mareykanka uu hadda u soo bandhigay warbixintan? Maxayse ka badali kartaa xaaladda ka jirta Itobiya gaar ahaan doorashooyinka sanadkan horaantiisa la qabanayo? Su’aalahaa iyo kuwa kale ayay dadka doodahaya iyo meelaha fadhi-ku-dirirka qawmiyadaha ay aad ugu kala duwan yihiin. Qaar ayaa ku doodaya arintan waxaa sabab u ah looltanka ka dhexeeya Shiinaha iyo Mareykanka oo labadaba isha ku haya Shidaalka Ogadenya. Meesha kuwa kale ay leeyihiin mayee waa digniin la siinayo siyaasiyiinta Itobiya inay danta dalkooda ka fikiraan oo u midoobaan sidii looga qaadi lahaa xukunka kooxda Tigreega ah intaanu dalka Itobiya burburin. Kuwa kalaa waxay leeyihiin, Mareykanka wuxuu dareemayaa dambi (guilty feeling) inuu ka galay shacabka Itobiya markuu taageeray budhcadda TPLF, sidaa daraadeed ayuu hadda ugu qabtay tooshka.
Sikastaba ha ahaatee waxaa iyada lagu midaysan yahay inay xaqiiqa jirta tahay warbixinta lagu soo bandhigay Documentriga Sirdoonka Mareykanka. Riix Hoos: